Fagtuurka Raashinka ee Xaalada Degdega ah | Su’aalaha Inta Badan la Isweydiiyo (FAQs)
(Abriil 30, 2021)
Barnaamijka Fagtuurka Raashinka xaalada degdega ah waxa uu ku eeg yahay Abriil 30, 2021. Wa kuwan Su`aalaha Inta Badan la Isweydiiyo.
Waa maxay sababta uu u dhamaanayo barnamiijka Waraqadaha Lacag Bixinta Dukaamaysiga ee Xaaladaha Degdegga ah?
Maaliyad xaddidan awgeed, barnaamijka Fagtuurka Cuntada Xaalada Degdegga ah ayaa loogu talo geley dadka aadka u jilicsan ee u qalma oo kuwa diiwaangashan ugu badnaan toddobo bilood. Laga bilaabo Abriil 30, 2021, dhamaan dadka qaata waxa ay dhamaysteen mudadooda qaadashada iyo dhamaan lacagtii la heli karayay ee barnaamijya waa la qaybiyay.
Waxa aan heley $180 kaadh ah Maarso ama Abriil – miyay gunada ku jirta kaadhku dhacaysaa?
Maya, lacagta kaadhka ku jirtaa ma dhacayso. Laakiin, lama badalo kaadhka lumay ama la xaday. Waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee ku saabsan kaadhka:
Kaadhkan waa laga shaqaysiiyay oo waa la isticmaali karaa.
Kaadhkan waxaa lagu isticmaali karaa tukaamada Safeway iyo Albertsons.
Kaadhkan waxaa lagu iibsan karaa cuntada, agabka guriga, iyo shayada kale ee shakhsi ahaaneed.
Kaadhadhku MA badalo lacagta cad ama kaadhka kiridhidka.
Kaadhkani LOOMA ogola in lagu iibsado khamriga, tubaakada, tigidhada bakhtiyaa-nasiibka, Western Union ama Money Gram, kaararka hadiyadaha kale ama adeegyo miiska adeega macmiilak ah. Kaadhka si toos ayuu u kala saari doonaa wixii alaab la ogol yahay iyo kuwa aan la ogolayn dalabka dhaxdiisa oo waxa uu ogolaanayaa in lacagta ku jirta kaadha in loo isticmaalo shayadan.
Waxa aad u isticmaali kartaa kaadhka qaab bixin kale marka aad shay kaliya iibsanayso.
Waxa aan ku jiray barnaamijka laakiin maan helin dhamaan fagtuuradii/kaadhadhkii la ii soo diray.
Ma badalno fagtuurka/kaadhka lumay ama la xaday.
Fagtuurada iyo kaadhadhka waxaa lagu soo diraa boosta USPS oo loogu diraa dadka u qalma iyo dadka la siiyo ee ku jira cinwaanka boosta ee arjiga ku qoran ama cinwaanka cusub ee boosta, hadii la bixiyo. Qaybinta ugu danbaysay waxay ahayd $180 kaadhadh ah oo la diray Maarso 25, 2021. Abriil oo dhan, waxa aanu la soconay wixii kaadhadh ah ee lagu soo celiyay Magaalada ee aanay boostu gaynin, oo waxa aanu isku daynay wax kasta si aanu dib ugu dirnay si waafaqsan xeerarkeena soo celinta. Laga bilaabo Abriil 30, 2021, wixii intaa ka danbeeya waanu noojinay ama dib umaanaan dirin kaadhahkii lasoo celiyay.
Maarso 2021, waxaa la ansixiyay xidhmo cusub oo guno oo COVID-19 ah oo federalka ah. Ma waxay ka dhigan tahay tani in barnaamij Fagtuur Cuntada ah oo Xaalada Degdeg ah oo cusub la heley?
Ansixinta xidhmada gunada COVID-19 ee ugu danbaysay markii la heley (American Rescue Plan), xafiiska Duqa iyo Xafiiska Miisaaniyada Magaaladu waxay kala shaqaynayaan Shaqaalaha Dhexe ee Golaha Deegaanka, Xafiiska Madaxwaynaha, iyo Xafiiska Gudoomiyaha Maaliyada sidii loo ogaanlahaa mudnaananaha maalgelinta ee deegaanka. Qiimaynta Miisaaniyada Magaalada iyo Xafiiska Xidhiidhka Dawladaha Dhaxdooda waxay wataan qiimaynta xidhmada samofalka si ay u arkaan nooca kaalmada federalka ee la heli karo, cida u qalanta kaalmadaas, iyo meelaha ay ka iman karaa galdalooda cida loo shaqaynayo. Waxa aanu ognahay inay jiraan baahiyo joogto ah oo kaalmo tooska ah sida barnaamijka fagtuurka cuntada oo buuxiya baahiyaha inay yihiin mudnaanta bulshada iyo dadka la shaqeeya. Shaqaalaha Magaalada waxa ay ku xisaabtamayaan inta aanu eegeyni mudnaanta maalgelinta mustaqbalka.
Waxa aan iminka u baahanahay kaalmo – khayraad sidee ay ayaa la heleyaa?
COVID-19-kan: Khayraadka Bulshada boga waxa ku jira macluumaad iyo lifaaqa shabakadda ee Magaalada Seattle, Ismaamulka King, Gobolka Washington, federaalka, iyo barnaamijyada bulshada. iyo adeegyada ka caawiya dadka deegaanka inay si weyn u saameeyeen cudurka caalamiga ah ee COVID-19. Qaar kamid ah barnaamijyada cuntada iyo adeegyada waxaa kamid ah:
Washington Connection waxa uu bixiyaa qaab fudud oo dhakhso ah oo qoysaska iyo shakhsiyaadku u dalbadaan adeegyo faro badan oo kala duwan sida Barnaamijyada Cunto, Lacag, Daryeelka Ilmaha, Daryeelka Mudada Dheer, iyo Kaydka Daryeelka Caafimaad. Macluumaad dheeraad ah ayaa ku jira halkan.
Liiska khariirada iyo liiska kaydka cuntada, goobaha cuntada, iyo cuntada ay ardaydu inta ay qaadato ay la tagto. Halkan guji si aad u baadho khayraadka.
Qado qiimo jaban ama bilaash ah ee Dugsiyada Shacabka Seattle. Macluumaad badan kaga ogow oo ka dalbo halkan
Qoysaska leh caruurta ku jira qadada bilaashka ah iyo qiimaha jaban ee Dugsiyada Shacabka Seattle waxaa u bilaabi doonta gunada loo yaqaan Pandemic EBT (P-EBT) Abriil 2021. Macluumaad badan ka oggow Dugsiyada Shacabka Seattle websaytkooda ama adiga oo kala hadlaya Xarunta Xidhiidhka P-EBT 1 (833) 518-0282 (turjubaan ayaa la helayaa).
Keenis guriga oo bilaash ah cuntada dhalinyarta ee ku nool guryaha Maamulka Guryaynta ee High Point, New Holly, iyo Rainier Vista Seattle Si aad u dalbato cuntada guriga la iskugu keenayo, buuxi foomka onleynaka ah ama la hadal (503) 395-7697.
Barnaamijka cuntada ee dadka waayeelka ah (da’da 60+) iyo Cuntada Dhooliga. Kala xidhiidh Community Living Connections 1 (844) 348-5464 (bilaash) si laguugu xidho adeegyada Seattle iyo Degmada King.
Barnaaijka Quudinta Xaalada Degdega ah waxa uu bixiyaa bushqado hordhac ah oo cuntada ah oo uu siiyaa dadka la kulmay cunto yaraan. Waxa ay sidoo kale leeyihiin barnaamijka khamiista iyada oo gaadhiga ay dadku jiraan ay ka qaadanayaan cuntada dadka 55 jirka ah ama ka wayn. Waakan macluumaad dheeraad ahi.
Guri-geynta lacag la’aanta ah ee sanduuqyada cuntada degdegga ah inta lagu guda jiro cudurka safmareenka ah ee COVID-19. Adeegan waxa loogu talo geley dadka aan awoodin inay tagaan kaydka cuntada deegaanka iyaga oo socda oo aan awoodin inay iska bixiyaan cuntadooda. Si aad u dalbato kartoon cunto ah, waxa aad buuxisaa foomka onleynka ah.
Northwest Harvest SODO Community Market waxa uu bixiyaa cunto marka hore la mooriyay, cunto diyaar ah, iyo cunto mudo wanaagsan oolaysa oo uu albaabka ku bixiyaa. Looma baaha in la galo xarunta. Waxay u furan tahay tani DA’ KASTA Suuqa Bulshada SODO waxa uu ku yaalaa xaafada SODO ee Seattle ee 1915 4th Ave S, near the corner of 4th Ave S & S Holgate St.
Iskaashatada sayska ah ee Koonfurta Degmada King iyo Dhanka Bari ee Kooxda Kaalmada Laba Geesoodka ah ee COVID-19 waxay kala shaqaynayaan u gaynta cuntada “dadka ka badbaaday, xanuunsanaya & laxaadka la’, dadka difaaca jidhkoodu liito, dadka aan waraaqaha haysan, dadka madaw, khaniisyada, dadka dhaladka ah, iyo ama dadka midabka ah.” Foomamka la doonayo waxaa laga heli karaa halkan.
Waxa aad sidoo kale macluumaad badan ka ogaan kartaa oo ku saabsan adeegyada hoos ku qoran ee COVID-19: Khayraadka Bulshada. Wixii su’aalo ah, fadlan kala hadal Xafiiska Adeega Macmiisha Magaalada Seattle Isniin ilaa Jimce, 8:30 subaxnimo – 5:00 galabnimo (206) 684-2489 ama (206) 684-CITY.